Soo ogow Paradores xarrago leh oo ku yaal Galicia | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Guryaha, General
ka Paradores waa qayb ka mid ah shirkadda hoteelka kaas oo xarumo ku leh Spain oo dhan iyo hadda sidoo kale Portugal. Dhismayaashaan waxay u taagan yihiin inay yeeshaan goobo qiimo weyn leh oo taariikhi ah ama dhaqan. Taasi waa sababta ay u noqdaan meelo gaar ah oo ay joogaan, ku habboon inay ku raaxaystaan ​​taariikh yar meelaha dalxiiska.
Aan aragno Bandhigyada Galicia, kuwaas oo badan oo laga helo dhismayaal qurux badan, qaar badan oo ka mid ahna taariikh badan ku leh gudaha. Shabakadan baraha bulshada waxaa macquul ah inaad ku raaxeysato meelo gaar ah dhaxalkooda awgood, waana sababta ay u mudan tahay inaad ku nagaato.
1 Waa maxay Paradores de turismo
2 Parador ee Santiago de Compostela
10 Parador ee Santo Estevo
Waa maxay Paradores de turismo
Shabakadda shirkadda Paradores de Turismo waxay ka kooban tahay hoyyo ku yaal dhismayaal summad ama taariikhi ah. Dhab ahaan, 30 ka mid ah huteelladdeeda waxaa loo kala saaray inay yihiin Hanti Dano Dhaqameed. Waxay leeyihiin qiimo weyn oo taariikhi ah iyo farshaxanimo iyaga oo u rogay goobo dalxiis ayaa ka caawisay in si sax ah loo ilaaliyo hidahaas loona cusboonaysiiyo Galicia gudaheeda waxaa jira meelo badan oo loo asteeyey inay yihiin marawaxado, qaarkoodna ay ku yaalliin dhismayaal hore oo dhagax ah.
Parador ee Santiago de Compostela
Parador de Santiago de Compostela waxaa loo yaqaan Hostal dos Reis Católicos waxayna ku taalaa Plaza del Obradoiro, oo ku xigta Cathedral-ka caanka ah ee Santiago. Shaki la'aan waa goob gaar ah oo lagu raaxeysan karo aagga taariikhiga ah ee magaalada iyo gaar ahaan barta ay ku yimaadaan boqolaal xujey ah. Dhismahan waxaa loo abuuray sidii Isbitaal Boqortooyo qarnigii XNUMXaad si uu uga qayb galo xujaajta timid Santiago. Dhismahan waa Madxafka Parador oo leh afar xaleef iyo qol qurxoon oo qurux badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay cibaado fiiqan oo lagu dhawaaqay inay tahay Taallo Qaran.
Bandhigani wuxuu ku yaalaa kaniisada Santa María ee Monterrei, Ourense. Hagayaashu waxay ku yaalliin a Qasrigii hore ee qasriga oo fure u ahaa difaaca soohdinta uu la wadaago dalka Boortaqiiska, oo ku taal kaliya 28 kiiloomitir. Qasriyadani waxay ka koreysaa qalcadda Baroncelli waxayna leedahay dhowr xayndaab oo derbiyo leh, isbitaal loogu talo galay dadka sodcaal ah, qalcaddii oo leh garoonkeeda, xafladda, kaniisada Santa María de Gracia iyo Qasriga Tirakoobka. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu weyn ee Galiisiya oo hadda ku taal barxadda.
Bandhigani wuxuu ku yaal badda dhinaceeda, magaalada Pontevedra ee Baiona, oo u dhow xuduudda Boortaqiiska iyo aragtida jasiiradaha Cíes ee caanka ah. Waxaa ku jira qolal si gaar ah loo qurxiyay, aqlabiyad badan oo leh aragtiyo badda iyo makhaayad aad isku dayi karto suxuunta Galician ee macaan.
Waxay ku taal tirada dadka na siisa khamriga Albariño ee macaan waxaad ka heli doontaa Parador de Cambados oo caan ah, bartamaha magaalada. Bandhigani wuxuu ku yaalaa duuggii hore ee Pazo de Bazán. Fazosku waxay ahaayeen guryo waaweyn iyo guryo waaweyn. Maanta qaar badan oo ka mid ah waxaa loo beddelay hoy hodan ah. Bandhigani wuxuu leeyahay barxad gudaha ah oo leh barxad
Bandhigani wuxuu ku yaalaa magaalo xeebeedka Ferrol, A Coruña. Waa daar weyn oo badmaax u eg oo leh galleello cadcad oo caadi ah. Horusocodku aad ayuu udub dhexaad u yahay, maadaama uu ku yaallo xaafadda Magdalena.
Bandhigani wuxuu ku yaalaa gudaha dhismaha dhismaha San Vicente do Pino, oo ku taal magaalada Portuguese ee Monforte de Lemos. Hagayaashu waxay ku yaalliin Qasrigii hore ee tirsiga Lemos agtiisaana waa Torre del Homenaje iyo Monastery of San Vicente do Pino. Tani waa qodob ku habboon in lagu barto Ribeira Sacar, oo leh khamrigiisa caanka ah, oo aad ku qaadato safar doon ah Sil Canyons.
Bartamaha magaalada Pontevedra waa halbeega ay ku taal, dhismaha Renaissance ee laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Bari Parador wuxuu deganaa Tirada Maceda waana qeybtii hore ee magaalada, masaafo yar oo socod ah meelaha xiisaha leh sida Iglesia de la Peregrina.
Bandhigani waa oo ku taal afka webiga Eo, ee gobolka Lugo. Hagayaashu waa guri duug ah oo reer Galiyaani ah oo ku yaal magaaladan u dhow xadka Asturias iyo badda.
Parador ee Santo Estevo
Bandhigaan quruxda badan wuxuu ku yaalaa Monastery hore ee Santo Estevo, oo ku taal wadnaha Ribeira Sacra ee Ourense. Waa muuqaal aad u qurux badan oo ku xeeran dabeecadda, laguna dhisay qaabkii Baroque iyo Romanesque. Waxaa loogu dhawaaqay Taallo Taariikhi Taariikhi ah 1923.
Bandhigani wuxuu ku yaalaa a jir dhaqameed Galician pazo, oo leh qaab dhismeedkeeda caadiga ah. Waxay ku taal magaalada Tui, oo u dhow Boortaqiiska, oo ku taal gobolka Pontevedra.
Bandhigani wuxuu sidoo kale ku yaal a caadiga ah Galizia dhagax pazo. Waxay ku taal Verín, halkaasoo lagu qabto Carnivals-yada ugu caansan dhammaan Galicia. Dhinaca kale, waa mid ka mid ah hoyga yar ee leh barkad dabaal u gaar ah, maaddaama magaaladu ka fog tahay xeebta.
Parador de Vilalba waxaa lagu abuuray dhisme duug ah oo wali leh taallo u eg qarniyadii dhexe. Yaab Hoolka Andrade, oo leh jaakadaha gacmaha iyo rinjiyeynta derbiga. Vilalba waa magaalo xasilloon oo ku taal Lugo iyada oo loo maro Camino del Norte dhanka Santiago de Compostela.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Guryaha » Bandhigyada Galicia
Xeebta Cathedral ee ku taal Lugo, Galicia
Burgos Cathedral, qurux qurux badan